Avi ကနေ mpg ပြောင်းလို့ရတဲ့ Converter လေးပြောပေးကြပါ. — MYSTERY ZILLION
Avi ကနေ mpg ပြောင်းလို့ရတဲ့ Converter လေးပြောပေးကြပါ.
July 2008 edited March 2009 in File Request
hello MZ members
ကျွန်တော့်ကို အဲ့ဒီ converter လေး ပြောပေးကြပါ....ကျေးဇူးနော်....:103:
software တွေတောင်းတဲ့အတွက် File Request အောက်ကိုရွှေ့လိုက်တာ်နော်။
ကျွန်တော်က new user ဆိုတော့ သိပ်မသိလို.နော်....အခုလိုဖြေပေးတာကျေးဇူးနော်...
ကို ဂလစတီကို ရေ Converter အတွက် ကတော့ ယယယ.xilisoft.ကွန်း ကို သွားကြည့်ပါ....ရှာကြည့်ပါ ဗျို့.....
အဲ့ဒီမှာ အသုံး၀င်တဲ့ Converter အများကြီးရှိပါတယ်....ကိုယ့်ဟာ ကိုသာ ကြုတ်ကြက်လိ လိုက်ပါတော့ ဗျို့.....
hello MZ membersကျွန်တော့်ကို အဲ့ဒီ converter လေး ပြောပေးကြပါ....ကျေးဇူးနော်....:103:
ချစ်ညီရေ converter တွေကတော့ အမျိုးစုံနေတာပဲ၊ အလွယ်တကူလေ့လာလိုလျှင်
်မြန်မာလိုရှင်းပြထားတဲ့ internet ဂျာနယ် တွေမှာဖတ်ကြည့်ပါ...ကျေးဇူးတင်လျက်
အနော်သိတဲ့ converter တစ်ခုရှိတယ်ဂျ။ သူက ကြိုက်တဲ့ format လာ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့format ကိုပြောင်းလို့ရတယ်။ နောက် Quality ကလဲ ကြိုက်သလို ချိန်နိုင်တယ်။ Video ပဲဖြစ်ဖြစ် Audio ပဲဖြစ်ဖြစ် လာခဲ့အဆင်ပြေတယ်။ သူ့ကို အနော်က Div X နဲ့တွဲသုံးတယ်။အစက flv convert လုပ်ဖို့ရှာရင်းနဲ့တွေ့လာလေ။ နောက်မှ တော်တော်ကောင်းမှန်းသုံးရင်းနဲ့သိလာတာ။
အဲ့ဒီ converter က Total Video Converter ပါပဲ။ ဘယ်မှာယူလို့ရမလဲဆိုတာကတော့ ကို အိပ်ဇစ်တာ ဂျီးကိုမေးရင် ပိုကောင်းမယ်။ အနော်လဲမမှတ်မိတော့ဘူး။ ပြန်ရှာတော့လဲ Trial version တွေပဲတွေ့နေတယ်။
Download--->Total Video Converter
http://www.mysteryzillion.com/forums/showthread.php?t=770 ဒီလင့်မှာ ကျွန်တော်တင်ထားပြီးတာလေး တခုရှိပါတယ် ။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ
procoder software ကအကောင်းဆုံးလို့ကျနော်ထင်ပါတယ်(ကျနော့အထင်ပြောတာနော်)
အခုလက်ရှိ video Editing မှာသုံးနေကြသလို qualityလဲအရမ်းကောင်းတယ်..
ဒါပေမယ့် ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတော့ ဆိုင်မှာ၀ယ်သုံးမှပဲအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်..(အကြံပြုတာပါ):D
မရဘူးဗျ။page not found လို့ပြောနေတယ်။
linn thant wrote: »
ကျွန်တော်တို့ MZ ကို .com ကနေ .org ပြောင်းလိုက်တဲ့ အတွက် အဲလိုဖြစ်သွားတာပါ။
.com နေရာမှာ .org လို့ပြောင်းလိုက်ရင်ရပါပြီး။
http://www.cocoonsoftware.com ဒီမှာ အလကား Quick Media Converter ရနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေ တော်တော်များများကို ကွန်ဗတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ အခမဲ့ အိုးပန်းဆော့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလင့်မှာ ကျနော် reply ရေးပေးထားတဲ့ ဆောဖ့်ဝဲလ်သုံးလိုက်။
အရမ်းကောင်းတယ်။ ဆိုက်လည်းသေးတယ်။ လင့်လည်းအလုပ်လုပ်သေးတယ်။
portable software ပါ။ ကျနော်လည်း လက်ရှိအဲဒါပဲသုံးနေတယ်။